Any Amerika Atsimo, tia sy mahafantatra ny fomba mahafinaritra azy izy ireo. Ny fialantsasatra any Arzantina - na hetsika ara-pinoana, na fanjakana na ao an-toerana - dia mihazona hatrany hatrany. Matetika izy ireo no maharitra andro maromaro, ary tafiditra ao anatin'izany ny vahoaka manontolo.
Mahaliana fa na any amin'ny tanàna lehibe tahaka an'i Buenos Aires aza dia tsy misy fitsangatsanganan'ny polisy ny fialan-tsasatra: tsy misy faritra alaina eo ambany fifehezan'ny mpitandro filaminana, ny olona dia afaka mandeha na aiza na aiza, ary tsy misy korontana. Mandritra ny fialantsasatra ao an-drenivohitra, dia manakana sy mametraka Avenida de Mayo fotsiny ny mpandeha, ary indraindray làlana afovoany (ohatra, Avenida Corrientes sy Avenue amin'ny 9 Jolay ).
Mankalaza ny daty nasionaly, fialan-tsasatra katolika isan-karazany (Arzantina, ny ankamaroany dia Katolika, tena mpivavaka), ary koa isan-karazany ny fialantsasatra voalohany. Ohatra, ao Buenos Aires, misy fifaninanana kanto sy fiara tranainy, raha tsara tarehy - solontenan'ny firenena samihafa monina ao Arzantina, mandalo ao an-tanàna amin'ny fiara miverina, ary mankasitraka azy ireo eny an-dalamby ny mpijery.
Ny fetim-pirenena ao Arzantina dia fialantsasatra ara-pinoana sy ara-pinoana:
1 Janoary - Taombaovao; Ity fialantsasatra ity dia heverina fa "trano", toy ny Krismasy, ary mangina tsara izany, na dia mazava ho azy aza ny tanàna dia tsara tarehy ary misy fifaninanana isan-karazany, fifaninanana ary hetsika hafa;
6 janoary - Reyes Magos (Andron'ny Mpangalatra) - fety ho fanomezam-boninahitra an'ireo olon-kendry izay tonga hiankohoka amin'ilay zazakely Jesoa;
Ny 24 Martsa dia ny Andron'ny fahatsiarovana ireo niharam-boina tamin'ny "ady maloto", navotsotry ny junta miaramila, izay nanapaka ny firenena nanomboka tamin'ny 1976 ka hatramin'ny 1983;
Ny Paska, toy ireo fety ara-pinoana lehibe rehetra, dia tena lehibe.
Ny 2 Aprily - Andron'ny veteranina sy ireo izay maty nandritra ny ady ho an'ny nosy Malvinas. Antsoina hoe Andro ny Nosy Malvinas koa ny daty;
1 Mey - Andron'ny asa;
Ny 25 May no andron'ny firenena. Antsoina hoe "Andron'ny Revolisiona Mey" ny fialantsasatra ho fankalazana ny revolisiona tamin'ny May 1810. Antsoina hoe "Andron'ny Governemanta Voalohany" izy io;
20 Jona - National Flag of Argentina. Andro fahatsiarovana ny lehilahy iray izay nanamboatra ny sainam-pirenena Arzantiniana - Manuel Belgran;
9 jolay - Andron'ny fahaleovan-tena;
Ny 17 Aogositra no andron'ny fahatsiarovana an'i Jose de San Martin, ilay mahery fo nasionalin'i Arzantina, iray amin'ireo mpitarika ny tolona ho amin'ny fahaleovantena;
11 Septambra - Andron'ny Mpampianatra. Ity andro ity dia tsy andro iray, fa ankalazaina manerana ny firenena;
Ny alatsinainy faharoa amin'ny volana oktobra dia ny Andro Columbus (ny Andro any Amerika). Amin'izao andro izao dia manamarika ny tsingerintaona nahaterahan'i Columbus teo amin'ny morontsira amerikana. Antsoina hoe Andro fanajana ny fahasamihafana ara-kolotsaina ihany koa ny fialantsasatra;
8 Desambra - Fetin'ny tsy firaharahiana tsy fantatry ny virjiny Maria;
25 Desambra - Krismasy.
Karnavaly sy fety
Ny malaza indrindra amin'ny karazana fankalazana ao amin'io firenena io dia:
Karnavaly any Gualeguaichu . Ao Arzantina, toy ny any Brezila, dia ny karnavaliny. Tsy dia malaza loatra izy noho ilay fialan-tsasatra malaza ao Rio, saingy ny loko dia tsy ambany noho ny rahalahiny. Ankoatra izany, ny karnavalon'i Arzantina dia tompon'ny faharetan'ny faharetany: mitranga amin'ny asabotsy amin'ny roa volana voalohany amin'ny taona.
Ny fetiben'ny vanin-taona. Tamin'ny herinandro voalohany tamin'ny fararano (nanomboka ny alahady lasa teo tamin'ny volana febroary ka hatramin'ny asabotsy voalohany tamin'ny volana Martsa), ny Fiesta Nacional de la Vendimia nentim-paharazana dia natao tao amin'ny faritanin'i Mendoza. Ny fetibe dia manomboka amin'ny fankalazana ny Blessing of Fruits, ary mifarana amin'ny fampisehoana matihanina goavana. Mandritra io fankalazana io dia misy tsiro, paradisa, tsena ary ny safidin'ny Mpanjakavavin'ny hatsarana eo amin'ireo solontenan'ny departemanta ao amin'ny faritr'i Mendoza .
Ny fetin'ny mpifindra monina dia manomboka amin'ny fiandohan'ny Septambra (ny alakamisy voalohany amin'ny volana). Manana 11 andro izy io ary mahasarika olona maherin'ny 150.000 isan-taona. Ao anatin'io fialantsasatra io dia misy paradisa eo amin'ny sehatry ny firenena, fifaninanana, ary koa ny hanandrana ny lovan-tsakafon'ireo firenena any amin'ireo firenena ireo, mpifindra monina monina ao Arzantina. Ny 10 hektara ao amin'ny Park of Nations dia niova ho toeram-ponenana goavam-be iray, izay ahitana ireo "ambasady" avy any amin'ny firenena samihafa, anisan'izany ny Guarani Indians, ireo mponina indizena ao Arzantina. Ny fetibe dia mifarana amin'ny fifidianana ny Mpanjakavavy sy ny "printsy" roa amin'ny hatsaràna, "Miss National Costume" ary "Miss Friendship".
Ny fampisehoana gaucho dia azo lazaina ho fialantsasatra amin'ny fomba mahazatra ny teny. Na izany aza, ny fifaninanana nentim-paharazana ireo mpanambady, izay tsy maintsy asehony ny tanjany sy ny fahaizany, mamafy peratra, mifatotra amin'ny làlana manokana mandritra ny hazakazaka, satria lasa mpankafy ny fijerin'ny mpijery. Asehoy an'i Gaucho Feria de Matederos ny fampisehoana an-dalambe malaza indrindra any Arzantina. Ary afaka mahita azy isaky ny asabotsy ianao, ankoatra ny vanim-potoan'ny 25 Desambra hatramin'ny 3 Janoary ao amin'ny tsenan'ny omby ao Buenos Aires. Manomboka amin'ny 15-30 ny hetsika.
Festivals of Arts
Hatramin'ny 1994, tamin'ny volana oktôbra, Arzantina dia nankalaza fety iraisam-pirenena amin'ny mozika gitara. Voalohany dia natao ho fifaninanana ny guitaristes avy ao Arzantina, roa taona taty aoriana dia nanatrika izany ny solontenan'ny firenena Amerikana Latina, ary taona vitsy taty aoriana dia nahazo ny sata iraisam-pirenena izy. Nandritra ny taonan'ny fetibe, mpandray anjara maherin'ny 200.000 no nandray anjara tamin'izany. Ankehitriny dia heverina fa izy no lazaina fa fifaninanana mitovy amin'izany eto amin'izao tontolo izao.
Hatramin'ny taona 1999, ny renivohitra Arzantina dia nankalaza fetibe hafa iraisam-pirenena - ny Kongresin'ny Tango Mpanakanto. Mitranga izany amin'ny faran'ny volana Febroary na ny voalohandohan'ny volana martsa. Amin'ity indray mitoraka ity dia misy mpandihy matihanina matihanina sy dihy marobe any amin'ny kianja city. Ankoatr'izay, ireo andro ireo dia misy horonantsary, fampiratiana, fihaonambe, kilasy fianarana, tetikasa natokana ho an'ny tango. Isan-taona dia nitsidika olona 400 ka hatramin'ny 500 arivo ny fetibe.
Misy hetsika fanatanjahan-tena isan-karazany natao tany Arzantina, izay tena mahaliana indrindra amin'izany dia azo antsoina hoe Dakar Rally, izay natolotr'i Arzantina hatramin'ny 2009. Manomboka any Buenos Aires izany, ary mamarana azy any Rosario , tanàna fahatelo lehibe indrindra sy lehibe indrindra ao Arzantina. Talohan'ny nanombohan'ny fihetsiketsehana dia misy hetsika isan-karazany, ireo izay maniry dia afaka mankafy ireo fiara mandray anjara, maka sary miaraka amin'izy ireo ary mividy fahatsiarovana.
Syndrome ny fampihorohoroana ara-pihetseham-po
Tatyana Rybakova: teknika iray mitombo marefo
23 zava-misy momba ny "Game of Thrones", izay fantatry ny olona vitsivitsy
Ahoana ny fametrahana tantely - fitsipika ho fanangonana vokatra sarobidy ao an-tokantrano
Menu amin'ny fahaverezan'ny lanja iray volana
Fialamboly, toy ny atody fotsy
Cod miakatra amin'ny fety
Ny fihainoana mavitrika dia ny fitsipika sy ny teknikan'ny fomba
Scylla sy Charybdis - inona ity, inona no asehon'i Scylla sy Charybdis?
Ilaina ve ny misotro menaka oliva amin'ny maraina amin'ny vavany foana?
Gneiss amin'ny ankizy
Cefalgie of the brain - inona no aseho ao?
Ny hormonina amin'ny endriny - soritr'aretina, fitsaboana
Cutlets avy amin'ny kisoa
Horsetail - fananana medikaly sy fanoherana
Shampoo miaraka amin'ny zinc